नरा’म्रो सपना देख्नुभो ? जप गर्नुहोस् यस्तो मन्त्र : – Sadhaiko Khabar
नरा’म्रो सपना देख्नुभो ? जप गर्नुहोस् यस्तो मन्त्र :
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २२, २०७८ समय: ६:५९:०९
कस्तो सपना देखे के गर्ने ? नरा’म्रो सपना देखियो भन्दैमा आ’त्तिनु अनि राम्रो सपना देखियो भन्दैमा मा’त्तिनु हुदैन । नरा’म्रो सपना देखेमा आफ्नो कुलदेवतालाई स्मरण गरेर तुलसीको मठमा जाने अनि ‘ॐ नमो भगवते वाशुदेवाय:’ एकसय आठ पटक जप्ने त्यो नराम्रो फल निष्फल हुन्छ । पिपलको दर्शन गर्ने र बिशेष गरेर राहु केतु अनि शनि ग्रहको जप गर्ने गर्नुपर्दछ ।
पाठ अनि अस’हायलाई दान गर्दा अवस्य पनि नरा’म्रो सपनाको फल टरेर जान्छ । नरा’म्रो सपना देखेरे फेरि पनि आफै निदाईयो भने त्यो सपनाको फल स्वत: निष्फल हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
पटक पटक नरा’म्रो सपना आउने र जीवनमा धेरै नै अ’सर गरेको छ भने “शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दु:स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहत्म्यं शृणुयान्मम” यस मंत्रले सम्पुट पाठ गर्दा अवस्य पनि जीवनमा सकारात्मक उ’र्जा मिल्दछ । नरा’म्रो सपना देखियो भने सबैलाई भन्दै हिड्यो भनेपनि त्यो सपनाको फल नि’ष्फल हुन्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ ।
भनिन्छ राम्रो फल दिने सपना देखियो भने सुत्नु हुदैन । बिहानै उठेर गौमाताको दर्शन गर्ने अनि तुलसीमठमा गएर विष्णु भगवानलाई सम्झिएर तुलसी अर्पण गरेमा त्यो अवस्य पनि पुरा हुन सक्दछ ।
राम्रा सपना देख्नको लागि भने हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन गरेर मन प्रशन्न बनाउँदै राती सुत्नु पूर्व शिव, विष्णु, गणेश आदि भगवानको स्मरण गर्ने, धार्मिक तिर्थस्थल, मठ मन्दिर, मिठा मिठा भोजन अनि फलफूल आदिको कल्पना गरि योगनिन्द्राको अभ्यास गर्दा शुभ फलदिने राम्रा सपनाहरू हामीले देख्न सकिन्छ ।